IMovistar + izokwenza utshalomali oluqinile ku-2017 ngochungechunge olusha olungu-14 nesabelomali esingaphezu kwezigidi ezingama-100 zama-euro. | Izindaba zamagajethi
UMovistar + ubheja ngokuqinile ochungechungeni nasekuhlaseleni iNetflix
UMovistar + ungumholi ongenakuphikwa eSpain kokuqukethwe okufunwayo, hhayi lokho kuphela, kodwa futhi nangokuqukethwe okubukhoma nezemidlalo. Kodwa-ke, ukufika kweNetflix eSpain kungadala isimanga ezinkampanini ezinjengeWuaki TV neMovistar + maqondana nokuqukethwe okudingwayo, ikakhulukazi ngaphambi kochungechunge lomkhiqizo ongowakho nowodwa njengoNarcos weNetflix noma iWestword esimweni seHBO. Ngakho-ke, IMovistar + izokwenza utshalomali oluqinile ku-2017 ngochungechunge olusha olungu-14 nesabelomali esingaphezu kwezigidi ezingama-100 zama-euro. Ake sibone ukuthi lokhu kuwuthinta kanjani umhlaba wokuqukethwe okubukwayo nokufunwayo eSpain.
Ngokusho kukaDomingo Corral, umqondisi wefilimu yokuqala kanye nochungechunge lwezokukhiqiza eMovistar, iningi lochungechunge olwethulwa yiNetflix endaweni yesikhulumi alunamsebenzi ngokuphelele, njengoba eveze engxoxweni yakhe no El Confidencial. Kungakho kukhombisa ukuthi ukuzibophezela kukaMovistar + kunamandla kakhulu kulokhu, ikakhulukazi maqondana nokuqukethwe kukazwelonke, ngoba INetflix isebenzisa kuphela cishe i-2% yesabelomali sayo eSpain, yize belungiselela uchungechunge lwabo lokuqala eSpain. Kuyiqiniso ukuthi iNetflix ezweni lase-Iberia ayigcini ngokuzungeza ngokuphelele, futhi ukuthi ukuncintisana nelikhulu elifana neMovistar cishe akunakwenzeka.
Kepha uDomingo Corral akayishiyanga i-Netflix yakhe lapho, futhi uveze amaparele anjenge: "Isethembiso seNetflix sokudala okuqukethwe kwekhwalithi eSpain kuyindlela yezimonyo", ixwayisa ngokuthi akuyona into eyenzeka e-United States lapho «Uchungechunge lungolwasendaweni kakhulu, basebenza ngesiko lomhlaba jikelele. AmaSopranos zingumkhiqizo wendawo ”. Le yindlela uMovistar azivikela ngayo ezithembisweni ezingamanga zeNetflix. Kodwa-ke, kunzima ngathi ukucabanga ngesimo lapho womabili amapulatifomu engahlali khona, umncintiswano muhle.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » General » UMovistar + ubheja ngokuqinile ochungechungeni nasekuhlaseleni iNetflix
Bakha i-chip ekwazi ukugcina nokucubungula idatha endaweni efanayo